Ciidamada PSF oo 10,000 dollar ugu deeqay cusbitaalka Qardho. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Ciidamada PSF oo 10,000 dollar ugu deeqay cusbitaalka Qardho.
Ciidamada PSF oo 10,000 dollar ugu deeqay cusbitaalka Qardho.
October 11, 2018 - By: Mohamud Nadif
Munaasabadaan kooban oo lagu qabtay gudaha cusbitaalka Qardho ayna kasoo qayb galeen maaamulka degmada Qardho, kan gobolka karkaar xildhibaan cabdirisaaq dhega horey oo ka tirsan baarlamaanka Puntland, odayaasha dhaqanka agaasimaha guud ee cusbitaalka Qardho Cusmaan Cbadi Awmuuse iyo saraakiil ka socotay ciidamada difaaca Puntland ee PSF ayaa salka ku haysay deeq lacageed oo dhan 10kun oo dollar oo ay ciidamadu ku wareejinayeen cusbitaalka si loogu dhamaystiro baahiyaha taagan, gaar ahaan dayactir lagu samaynayay qaybo lagu darayay cusbitaalka.
Cornel Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac Ilig oo ku hadlayay magaca ciidamada PSF isla markaana wareejinayay deeqdaan waxa uu sheegay in markii ay arkeen baahidaan , sidoo kalena loosoo gudbiyay agaasimaha guud ee ciidamada PSF Asad Cismaan Cabdilaahi ay goaansadeen in ay ka qaybqaataan, sidoo kalena Cornel Cabdiraxmaan waxa uu xusay in ciidamadu ay gacana ku difaacayaan dalka gacana ay kaga shaqaynayaan Arimaha bulshada.
Odayaasha dhaqanka degmada Qardho oo dhankooda goobta ka hadlay waxay ku amaaneen ciidamada iyo agaasimahooda Asad Cismaan Cabdilaahi sida wanaagsan ee ay guud ahaan gobolada Puntland uga wadaan ka shaqaynta arimaha bulshada, sidoo kale agaasimaha cusbitaalka Qardho Cusmaan Cabdi Awmuuse ayay ku bogaadiyeen sida nafhurinimada leh ee uu ugu taagan yahay horumarinta cusbitaalka iyo masuuliyada uu iska saaray dhismihiisa.
Duqa degmada Qardho Cabdi Saciid cismaan, gudoomiyaha Gobolka Karkaar Cabdilaahi Maxamed Bare iyo Xildhibaan Cabdirisaaq Muuse oo gabagabadii ka hadlay munaasabada waxay maamulka cusbitaalka ku bogaadiyeen dadaalada ay wadaan, sidoo kalena waxay ganacsatada iyo dadka wax haysta ugu baaqeen in laga qaybqaato dhamaystirka dhismaha oo weli ay wax badan ka dhiman yihiin.